Esenzakalweni esingajwayelekile sokulimala komuntu noma uma impahla yakhe ithola umonakalo phakathi nokuhlala okuvikelwe endaweni yakho, ungase uvikelwe ngumshwalense oyinhloko okuvikela uma usephutheni ofinyelela ku-$1,000,000 USD.
Kutholakala kubabungazi emhlabeni jikelele*
Uvikela ababungazi kusukela ekungeneni kuze kube sesikhathini sokuphuma
*Akusebenzi kubabungazi abanikeza izindawo zokuhlala nge-Airbnb Travel, i-LLC, ababungazi e-mainland China, ababungazi e-Japan, noma ababungazi bokokuzithokozisa.
Umshwalense Wokuvikela Ababungazi ungase uvikele:
Isibopho sakho esingokomthetho somonakalo wezindawo ezifinyelelwa yiwo wonke umuntu, njengezindawo ezingenela esakhiweni nezakhiwo ezingomakhelwane, obangelwa yisivakashi noma abanye abantu
Umshwalense Wokuvikela Ababungazi awuvikeli:
Ukonakala noma ukulimala okubangelwa okuthile okwenziwa ngamabomu (hhayi ngengozi)
Ukulimala kwendawo noma izinto zakho (lezo zingavikelwa yiSiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb*)
*Isiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb asihlobene noMshwalense Wokuvikelwa Kwababungazi noma i-Airbnb UK Services Limited.
Sizibophezele ekwakheni umphakathi ophephile futhi onokwethenjwa emhlabeni jikelele.
Ngokuba yisivakashi ngaphambilini, okuningi ukukhathazeka besekuvele kungasekho. Bengazi ukuthi indawo yami izovikelwa ngumshwalense… futhi bengazi ukuthi izivakashi zizoba nenhlonipho.”
U-Uslan, umbungazi e-London
Lapho umbungazi, isivakashi, noma umuntu oseceleni ethinta Ithimba Elisiza Umphakathi, i-Airbnb izonikeza imininingwane emayelana nenqubo yokufaka isimangalo.
Ngemva kokugcwaliswa kwefomu lokuthatha imininingwane, ummeleli omelela inkampani yomshwalense uzokuthinta ukuze axoxe ngesimangalo futhi athole imininingwane.
3. Isimangalo siyaphenywa
Ummeleli wezimangalo zabantu abaseceleni uxazulula isimangalo ngokuvumelana nemigomo yomthetho Womshwalense Wokuvikela Ababungazi kanye nemithetho esebenzayo nemithethonqubo emandleni angokomthetho afanele.
Umshwalense Wokuvikelwa Kwababungazi kuhambisana nemigomo ethile, izimo, nokubandlululwa. Ukuze ufunde kabanzi, dawuniloda amabalengwe ohlelo olunzulu.
Kukhona yini okudingeka ngikwenze ukuze ngivikelwe ngaphansi koMshwalense Wokuvikelwa Kwababungazi?
Ino. Uma bevuma ukufaka indlu ku-Airbnb, noma uma beqhubeka befaka indlu ku-Airbnb, ababungazi* bayavuma ukuvikelwa ngaphansi koMshwalense Wokuvikelwa Kwababungazi uma kuba nesidingo phakathi nokuhlala kwe-Airbnb. Phawula ukuthi Umshwalense Wokuvikelwa Kwababungazi uhambisana nenqubomgomo yemigomo, izimo, nokubandlululwa.
Ababungazi abafuna ukuphuma ohlelweni loMshwalense Wokuvikelwa Kombungazi kumelwe benze okulandelayo:
Sithumelele i-imeyili ngekheli le-imeyili elihlobene ne-akhawunti yakho yokubungaza
Faka igama lakho eliphelele nenombolo yocingo ehlobene ne-akhawunti yakho yokubungaza
Faka isihloko esifana ncamashi nendlu yakho
Sicela uphawule ukuthi ikheli le-imeyili yokuphuma ngeke liqashwe ngaphandle kokuphrosesa izicelo zokuphuma.
*Lokhu akusebenzi kubabungazi abanikeza izindawo zokuhlala nge-Airbnb Travel, i-LLC, ababungazi e-mainland China, ababungazi e-Japan, kanye nababungazi bokokuzithokozisa.
Eminye Imibuzo Evame Ukubuzwa
Uyini Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa?
Uyini umehluko phakathi kweSiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb noMshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa?
Umshwalense wabanikazi bezindlu usebenza kanjani noMshwalense Wokuvikelwa Kombungazi neSiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb?
Isivikelo somonakalo wendlu esifika ku-$1,000,000 USD sababungazi bamakhaya.
Umshwalense okuvikela uma usephutheni ofinyelela ku-$1,000,000 USD wababungazi bokokuzithokozisa.